Global Voices teny Malagasy » Fifangaroan’ny Mozika Manerantany, Nangonina Tamin’ny Lasan’i Haiti · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifangaroan'ny Mozika Manerantany, Nangonina Tamin'ny Lasan'i Haiti
Voadika ny 03 Aogositra 2016 4:47 GMT 1	 · Mpanoratra Public Radio International Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Karaiba, Haiti, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Tanbou Toujou Lou no fanomezana farany avy amin'ny Ostinato Records. Sary: Courtesy/Ostinato Records
Ity lahatsoratra nosoratan'i Paulus van Horne  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 28 Jolay 2016. Navoaka teto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ahoana no fomba ampitanao ny angovo madio hita ao amin'ny Tanbou Toujou Lou, angon-kira Haisiana miisa 19, vodou Jazz sy ny “fombafomba amin'ny herinaratra” tamin'ny dimampolo taona lasa izay?
Iray amin'ireo zava-tsarotra indrindra halaina amin'ny teny ny soritsoritra (groove). Inona no mpamaritra mifanaraka tsara ho an'ny gadona izay mangataka amin'ny vatanao mba hihetsiketsika?
Inona no matoanteny mifanaraka amin'ny hetsiky ny mpiangaly mozika izay maneho tsara ny feon'ny fotoana ara-kolontsain'izy ireo?
Henoinao manokana ny gadona Afro-Karaiba hita ao anatin'ity raki-tsary ity:
Miaraka amin'ny angona mahafinaritra tahaka izany, mora ny mitsambikina avy hatrany any amin'ny mozika ary manomboka mandihy.
Saingy ho an'ny mpihaino tsindraindray, mety ho sarotra kokoa ny maka sary an-tsaina ny fitarihana mifandona izay nahatonga ity kazarana feo sy gadona ity.
Niharan'ny lovan'ny fanandevozana hatry ny ela tao Etazonia sy Karaiba i Haiti. Nanomboka tamin'ny fotoana nidiran'ny mpikaroka Eoropeana teo amin'ny tontolo vaovao, niasa tao anatin'ny toekaren'ny fanandevozana i Haiti ara-toekarena. Tsy ao ihany no toerana tahaka izany, saingy ity no tena miavaka satria ity no toeran'ny fikomian manoloana ny fanandevozana naharitra folo toana, izay nitarika ny fahaleovantenan'ny nosy ary nahatonga ireo hetsika ho an'ny fahaleovantena teo amin'ireo zanatany Frantsay.
Tamin'ny 1957, voafidy ho filohan'ny Haiti i François Duvalier. Nanjary lasa mpanao didy jadona vetivety teo i Duvalier. Amin'ny politikany miafina, nitondra ny nosy tao anatin'ny fepetra henjana izy. Na izany aza, niroborobo ny mozikam-pirenena.
Maka sary ny lafiny mamiratra ao Haiti ny Tanbou Toujou Lou, fombafomba ara-mozika velomin'ny gadona Afrika Andrefana eo amin'ireo andevo teo aloha, fanondranana ara-kolontsaina ny tao Etazonia sy manodidina ny firenena Karaiba.
Ankehitriny, enintaona taorian'ny horohoron-tany goavana namono olona 200.000 tao amin'ny firenena-nosy, matetika mifantoka amin'ny fanamboarana sy ny fanampiana iraisampirenena ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena. Tsy voatatitra ny fandraisana anjara ara-kolontsaina manankarena nentin'i Haiti teo amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny mozika sy ny zavakanto. Amin'ity famoahana ity ny Ostinato Records manampy mampahatsiahy ny mpihaino tsindraindray ny tantara ara-mozika goavan'i Haiti .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/03/86059/